Abaqondisi-mthetho kwi bar Aveyron - Rodez - Millau - site officiel - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Abaqondisi-mthetho kwi bar Aveyron - Rodez - Millau - site officiel
Accustomed ukuba obutsha ngabo bonke zidityanisiwe Onesiphumo Private Network ka-abaqondisi-mthetho (RPVA), intranet inkqubo evumela kubo inkqubo in real time, iingxoxo, phambi kokuba Isigqeba de grande isehlo, Rodez okanye Inkundla isibheno ka-Montpellier
Baya anike esweni inkonzo, kwaye osisigxina, ulwaphulo-mthetho h h kwaye iintsuku ezingama- ngonyaka kwi lonke territory yesebe i-Aveyron.
Uyakwazi uqhagamshelane kaxakeka abaqondisi-mthetho ukuze ufumane ukuqeshwa a lawyer ukuba zakho zokusebenza kuvumela ukuba kuxhamla isemthethweni aid.
I-zecandelo Ibhunga sokufikelela umthetho (CDAD) kwaye abaqondisi-mthetho ye bar Aveyron kufuneka imiselwe phezulu ii-ofisi. Ukuba uhlale ezifanelekileyo(e) kwi-real ixesha kwi bar Aveyron kwaye, balaseleyo, ngoku perturbations enxulumene ne-hamba kweempahla protest ngokuchasene idrafti umthetho kwi programming kuba ubulungisa (PJPJ) landela kuwe egameni loluntu networks.
es abaqondisi-mthetho ye bar Aveyron, kakhulu iqhotyoshelwe ukuba iziko le-jury, kuhlangatyezwana ukuba parliamentarians kwicandelo a koyilo lomthetho-sihlomelo. Ukulandela olu tyelelo, isithandathu ka-aprili ngomhla inkundla Rodez, Nicole Belloubet, keeper ye-Seals, umphathiswa wobulungisa, sele iqinisekiswa ukuba ephanda umgwebi ingaba kugcinwa kwi Rodez. Abaqondisi-mthetho ye bar Aveyron kwi-thatha qaphela, kodwa bahlala vigilant kwaye mobilized ngokuchasene ezinye izibonelelo PJPJ.